Unzima umqhudelwano we-Nedbank Cup | News24
Unzima umqhudelwano we-Nedbank Cup
IMIDLALO yomqhudelwano wodumo ye-Nedbank Cup izoqhubeka kulempelasonto.
Lenkomishi noma lomqhudelwano usuthanda ngokuduma ngendlela ethusayo ngoba ofishi abancane bagcine bedle abakhulu.
Lokhu kusanda kufakazeke ngesikhathi iqembu elingadumile nelingaziwa kangako ebholeni laseMzansi i-KwaDukuza United lapho ikhiphe ithimu lePSL i-Ajax Cape Town ngo 3-2 emasontweni ambalwa adlule.
Umqeqeshi wabafana bakwaDukuza uThami Ngubane uthe noma ukunqoba kwabo kwi-Urban Warriors kwakuyinto enkulu kodwa uthi kuchaza kakhulu ngalomqhudelwano, futhi uyatshengisa ukuthi ufanele uhlonishwe. “Imiqhudelwano efana nalena iyahlonishwa futhi akufanele uyithathe kancane,”kusho uNgubane.
Okwababuhlungu ngeKwaZulu- Natal ukuthi amaqembu amabili nokuyiwona kuphela akuPSL iMaritzburg United neGolden Arrows aqathwa ndawonye kusekuseni nokwenza nokuthi elinye ligobe uphondo.
Sekuwumlando-ke noma sekungathi sekukhulunywa ngabasaphola ngaphansi komhlaba ngoba phela iTeam of Choice yagcina idliwe ngo 3-1.
Lokhu-ke kuchaza ukuthi Abafana Bes’thende sekuyibona kuphela abaphethe amathemba aseKwaZulu- Natal kwiPSL.
Umqeqeshi waBafana baseLaxie (Golden Arrows) uClinton Larsen uthi wawulukhuni nokunqoba kwabaqinisa.
ULarsen uthi akafuni ukuthi kuzwakale sengathi iqembu lakhe lizoziwinela kalula emzukiswaneni olandelayo.
“Awukaze ube khona umdlalo noma iqembu elilula emidlalweni yezinkomishi.
Yikho-ke nje uke ubone amathimu amancane noma angaziwa egcine edle amakhulu. Nathi kuzofanela siqaphele silwele nokushaya amagoli kusakhanya,”kusho uLarsen.
Phela iArrows izobe izalelwe yinja endlini, uThabsy namazenze akhe impela ngoba phela bazobe bebhekene neMamelodi Sundowns yoqobo.
Phela kulonyaka AmaSandawane athathwa njengezinqwele noma izikhokho zeAfrica yonkana emva kokuvala ngehlahla kuyoyonke imiqhudelwano yeCaf. Umqeqeshi weArrows uyavuma ukuthi kuzobe kusinda kwehlela kodwa phela nabo bayiqembu.
“Yebo ngiyavuma ukuthi umdlalo wethu neSundowns uzoba nzima ngoba bayiqembu elikhulu futhi badlala kahle. Kodwa nathi sizobe sidlalela ukuwina.”
Umdlalo weArrows neSundowns uzoba ngoMqgibelo eLucas Moripe Stadium ngo 3pm.
Isiyonke imidlalo yeNedbank Cup isiyonke imi kanje.
Chippa United vs Polokwane City, Nelson Mandela Bay Stadium, (3pm) Mamelodi Sundowns vs L.Golden Arrows, Lucas Moripe Stadium (3pm) Free State Stars vs Orlando Pirates, James Motlatsi Stadium (3pm) Sunday, 09 April Acornbush United vs Kaizer Chiefs, Kabokweni Stadium) 3pm Bloemfontein Celtic vs Mbombela United, Dr Molemela Stadium (3pm)